Vaovao Mafana · Jona, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Jona, 2012
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Jona, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Jona 2012
Maneho hevitra mikasika ny fahafatsan'i Nayef bin Abdulaziz Al Saud, Printsy mpandova fanjakana sady Minisitry ny Atitany reo Yemeni mpiondana aterineto. Izy no lehilahy matanjaka nitàna ny fitsinjaram-pahefana tao Yemen ary ambara ho niketrika ny fanisahana ny Al-Qaeda hiala tao Saudi Arabia ho any Yemen. Voatanisa ao anaty Wikileaks ihany koa izy ho nanondro an'i Yemen ho firenena tsy mankaiza.
Shina: Li Wangyang Gadra Politika Noho Ny Raharaha Tiananmen, Hita Maty Nihantona
Azia Atsinanana 13 Jona 2012
Li Wangyang, Shinoa iray gadra politika izay nandany betsaka tamin'ny androm-piainany tany am-pigadrana, dia hita maty ny marainan'ny Alarobia 6 Jona 2012, taorian'ny resadreska nataony ho an'ireo mpampahalala vaovao avy any ivelany mikasika ny vonomokan'ny 4 Jona (Kianja Tiananmen) tamin'ny 1989 sy ny fiainan'ireo gadra politika ao Shina. Ny fahafatesany dia niteraka ahiahy mikasika fitaka.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Jona 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Jona 2012